ဂဇက်စာပေဆု ဘယ်သူရသွားလဲဆိုတော့. . .ဆိုတော့. . .
- alinsett (gazette)
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ကြီး မသိစေနဲ့. . .
ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (၁၆)
နောက်ကျောကို လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့ သရဲမ
အဆုံးဆိုတာ တနေ့သောအခါ အစ ပါပဲ
myanmar new year 2014
အဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၁၂ ( Akaroa & Christchurch ) ။
လမ်းပေါ်မှာ ကြုံတွေ့ ရတယ်
သတိ လက်မလွှတ်ကြပါစေနဲ့ 
သီရိ ? သိရီ ?
“ကန် တော့ ရ သော အကျုိး အားေ ကြာင့်”
ကိုေ ပါက် လက် ဆောင်အတွေး ပါး ပါးေ လး
အနောက်ရိုးမသို့ အလည်တစ်ခေါက် Kan Thar Yar Beach…
အမည် သညာ ခေါ်စရာကား….
မျက်လုံးနဲ့ဖတ်ဖို့. . .လက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာ
မျက်လုံးနဲ့ ဖတ်ဖို့သာ. . .
မြန်မာတို့၏ မဟာသင်္ကြန် မြင်ကွင်းခဏတာ
သောက်သုံးတော် ပုလင်း ကိုလ ..အောက်ဆုံးမှာရယ် နောက်ဆုံးမှာ မထားရဘာဘု ..အိုဘယ့် .. မောင်ဖားမှာလည်း အသီး နဲ့ပါ
အင်ဂါလန်ကူးမား(ရ) ရဲ့ အင်ဒီ ကွတ် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
သေဘေးက သီသီလေးလွတ်ခဲ့တဲ့ ရေတံခွန်ခရီးစဉ်
ကျူးးးးးး ကျူးးးးး ပြီး လစ် တဲ့ Tulip
လောင်း မယ် ပက် မယ် သ င်္ကြန် ၀ယ်
ကို ပေါက် လက် ဆောင် မြန် မာ ပြည် မှ အ လှ တ ရား များ
အမှန် နှစ်ခု ကြားမှာ ….စစ် .
တွေးမိတွေး ရာ ကောက်ခြစ်ခဲ့တယ်
လုလု ပြောချင် တာ ရိုးရိုးလေးပါ
Page 1 of 83212345...102030...>»
Enter your name & email address below to Subscribe my mailing listName: Email: In & Out	Register	Log in
WordPress.org	How to WriteaPost	ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..။
Comments By Postအင်ဂါလန်ကူးမား(ရ) ရဲ့ အင်ဒီ ကွတ် - KZ's ထမင်းဆိုင် - ဘဆွေ - padonmarအဘဖေါ ရဲ့ နယူးဇီလန်သွား Cruise တောလား – ၁၂ ( Akaroa & Christchurch ) ။ - Foreign Resident - Foreign Residentအဆုံးဆိုတာ တနေ့သောအခါ အစ ပါပဲ - padonmar - alinsett (gazette)သင်္ကြန်ချိန်ခါသမယမှာ နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆုတောင်း - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - alinsett (gazette)ရိပ်သာတစ်ခေါက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - kai"ကန် တော့ ရ သော အကျုိး အားေ ကြာင့်" - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - kaiသံမဏိလူသား - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - alinsett (gazette)နောက်ကျောကို လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့ သရဲမ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAစဉ်းစားချိန် - lu lu - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသက္ကရာဇ်​တစ်​ခုထဲမှာဘဲ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - naywoon niဆရာဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်သောအခါ.... - ဦးကျောက်ခဲ - ရဲစည်မြန်မာတို့၏ မဟာသင်္ကြန် မြင်ကွင်းခဏတာ - lu lu - alinsett (gazette)အနောက်ရိုးမသို့ အလည်တစ်ခေါက် Kan Thar Yar Beach... - Phoe Kaung - kyeemiteသီရိ ? သိရီ ? - Ma Ma - Ma Ma သောက်သုံးတော် ပုလင်း ကိုလ ..အောက်ဆုံးမှာရယ် နောက်ဆုံးမှာ မထားရဘာဘု ..အိုဘယ့် .. မောင်ဖားမှာလည်း အသီး နဲ့ပါ - kai - Foreign Residentဒီ နိုင်ငံ - ကေဇီ - kaiကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (၁၆) - မိုး မင်းသား - alinsett (gazette)ဂဇက်စာပေဆု ဘယ်သူရသွားလဲဆိုတော့. . .ဆိုတော့. . . - မိုး မင်းသား - alinsett (gazette)ဝါသနာဘာဂီ... - alinsett (gazette) - ကေဇီအမျိုးသမီးနဲ့ .......................... - ကေဇီ - weiweiWestern Union	Category	Arts & Humanities
Top 10alinsett (96257 Kyats )Anzartone (86678 Kyats )Yin Nyine Nway (81300 Kyats )MaMa (77425 Kyats )intro (77197 Kyats )naywoonni (75478 Kyats )Khaing Zar Win (73529 Kyats )weiwei (71751 Kyats )SP (71488 Kyats )zaylay (67079 Kyats )	Tags2010
Myanmar IT Tutorials